Inkcazo ye "Post-holing" kunye nendlela yokuPhepha xa kuhamba
Yintoni ekubhekiselele kwiXesha elithi "Post-holing" kwi-Hiking?
I-post-holing yindlela edidayo yokuchitha ukunyuka kwebusika . Eli gama libhekisela ngqo into enokuyicinga ngayo: ukugoba okubonakalayo kwithuba lokungena kwi-fence emhlabeni-emncinci, echanekileyo, ejulile efakwe emhlabeni (okanye kwiqhwa, kwimeko yethu). Esi sikhokelo sogxininiso sisoloko siphumelela xa uhambo lwebusika linyuka kwizinto ezinokuqala ukukholelwa ukuba likhethi elinzima-umlenze wakhe udala, ngoko uhlala ngokukhawuleza, umgodi wokungena kwiqhwa.
Kwaye emva kokubanjelwa ekhephu elicwengekileyo, uhamba ngokunyuka ngokukhawuleza aze afumane iimeko ezahlukeneyo.
Xa umhlobo webusika usuqalisile ukuhamba emva kwesikhokelo, indlela yodwa yokuqhubela phambili (okanye ngasemva) inkqubela kukutsala umlenze ngamnye wangcwatywa ngqo kwikhephu ngaphambi kokuba uthathe isinyathelo esilandelayo. Oku kuthatha umlinganiselo omkhulu wamandla kwaye uphephe umgca wakho. Ukuba udibanisa kakhulu, njengokuba ufikelele kwi-hip, nje ukukhipha umlenze wakho ukusuka kumngxuma owenziwe ngumsebenzi wenene. Umqhubi ophoqelelwe ukuba achithe iyure okanye ezimbini ukuthunyelwa kwe-post-holing uya kuziva ukugquma emathangeni akhe nasezintanjeni iintsuku ezizayo. Akukho ndlela ephosakeleyo okanye eyingozi kakhulu yokwenza inkqubela phambili kwinqanaba leqhwa kune-post-holing-ngaphandle kokuba ihlobo lehlobo, iBwwwcking.
Ukuba Uzifumanisa kwiNgxaki yokuPhuma
Akukho nhlobo indlela yokunyuka ngokukhawuleza kwimeko elandelayo. Ukho uhambo olunzima lokuhamba ude wenze indlela yakho eya kwindawo eyahlukileyo eneqhwa elincinci, okanye omnye apho upakishwa khona nzima ngokwaneleyo ukuxhasa ubunzima bakho.
Eyona nto ingcono ongayenza yithatha ixesha lakho ukuze ugweme ngokupheleleyo. Gwema impembelelo ukuba uthathe amanyathelo amakhulu, njengoko oku kuza kukukhawuleza ngokukhawuleza. Kodwa unokuthi ugweme ukujikeleza kwintsimi engasemva kwemingxuma kwindawo yokuqala. Ukuba ufumanisa ukuba ungene kwiqhwa, izicwangciso ezifanayo zinokukunceda uqonde kwaye uhambele kwiqhwa elisondele kufuphi:
Ukunyuka ekuseni, ngaphambi kokuba imisebe yelanga kunye nokufudumala kwamaqondo okufudumala emoyeni kunganciphisa iqhwa elaneleyo ukuba ungene. (Musa ukulibala ukuthabatha ixesha lokubuya kwakho kwi-akhawunti.)
Ukuhamba kwiindawo ezisemgangathweni xa unako-iqhwa lihlala liqinile ngakumbi phakathi kwebusika.
Ngezinye iimeko zonyaka, kunokuba kungcono ukuba ugxininise ekuhambeni kwimihlaba yelanga apho ilanga liye lashisa iqhwa kwi-deeper depth that you can easily hike. Ngokukodwa ngasekupheleni kwebusika okanye ekuqaleni kwentwasahlobo, ukukhanya kwelanga kungabangela ukuhamba ngokuhamba phambili.
Cwangcisa indlela ekhusela iifomthi ezinzulu ngokupheleleyo. Ingubo ekhethiweyo yekhephu yenza indawo evulekileyo ibonakale iplani kwaye, kodwa ayikho. Ukuba unolwazi oluthile phantsi kwayo yonke iqhwa, unamathele kwiindawo apho iqhwa elingaphantsi.
Enye into enhle-mhlawumbi eyona nto ibhetele- kukuthatha nje iinkwenkwezi zokuncedisa ukuba ufikelele kwiindawo eziluhlaza xa udibana nazo. Izitambo ezinqabileyo ezilula ziyakwazi ukubopheka kwi-backpack kwanoma yiphina ubukhulu kwaye ziyakwazi ukuphoswa kwiibhotile zakho xa iimeko zekhefu zibiza umnxeba.
Izinto eziyimfuneko kubakhweli
Izintaba kunye nokuya esikhathini: FAQ
Indlela yokuKickflip kwi Skateboard
Yenza isonka seLammas Isonka
York, ilungu eliLungu leLee noClark Expedition
Ngaba Umele Uthenge I-Pool Cump Break Cue?
IA Nazareth College Admissions
Iingcali zeZiko leNzululwazi yeZiko leNzululwazi
Ii-Oldies eziLungileyo kunye nabaBenzi bama-'50s, 'ama-60s, kunye nama-70s
Izinto ezisisiseko: Isingeniso soMbane kunye neElectronike
Iinjineli zeenjini zeRadio zifuna ukunyanzela, kungekhona nje ngamanzi
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseMontana
Iimviwo zeYunivesithi zeMillikin
I-Aries kunye neCancer Love Compatibility
I-Turista: I-United States imele i-permitido
I-Biography kaGlenn Beck
Inkqubo Inkcazo kunye nemizekelo
Iimfundiso ezikufuphi-zokufa: Iimpawu zokufa emva kokufa